In la isticmaalo Easy PC in Transfer iPhone si ay u gudbiyaan Music, Photos iyo Xiriirada
> Resource > Transfer > PC in Transfer iPhone: Music Transfer, Photos iyo Xiriirada Si fudud
Photos dhaco tirtiray aad iPhone 4, nasiib wanaag, aad xoojiyaa oo dhan sawir aad kombuutarka? Download qaar ka mid ah heesaha caanka ah, PSY ee Gangnam Style tusaale ahaan, iyo rajaynayaa in lagu wareejiyo si aad iPhone u mahad? Si aad u buuxiso PC ay u kala iibsiga iPhone 4s, maxaad samayn doontaa?
Noqda Lugood caawimaad? Waxaa ka saari doonaa dhammaan faylasha badbaadiyey on your iPhone inta lagu jiro nidaamka ka. Dhab ahaantii, waxaad dooran kartaa kale. Halkan waa talo aad u - PC sahlan in la isticmaalo si loo kala iibsiga iPhone, Wondershare TunesGo Retro (Windows) ama Wonershare TunesGo Retro (Mac) . Labada nooc oo barnaamijkan awood aad si ay u gudbiyaan music, videos, playlists, sawiro, xiriirada, iyo in ka badan ka computer si aad iPhone. Ka sokow, waxa ay si buuxda u la jaan qaada iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 iyo iPhone 3GS, oo ay taageertaa macruufka cusub 9/8.
Download iyo rakibi TunesGo Retro in ay isku day ah!
Copy music, videos, sawiro iyo xiriirada la PC inay kala iibsiga iPhone
Labada nooc oo TunesGo Retro si fiican u shaqeeyaan. Halkan, waxaan qaadi version daaqadaha sida tusaale. Sida user Mac ah, waxaad dooran kartaa tallaabooyinka la mid ah ka hooseeya.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la PC in ay Transfer iPhone
Ka hor inta aanad bilaabin, loo soo dajiyo iyo ordi PC si kala iibsiga iPhone aad kombuutarka. Connect aad iPhone in computer via cable USB ah. Barnaamijkan wuxuu si toos ah loo ogaado doonaa iPhone sida ugu dhakhsaha badan uu ku xiran.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho TunesGo Retro, waxaa idinku waajib ah si loo soo dajiyo Lugood on your computer hore.
Tallaabada 2. nidaameed music, video, sawiro iyo xiriirada la PC inay kala iibsiga iPhone 3GS
Si aad nuqul music ka computer si iPhone, waxaad riixi kartaa "Media" geedka buugga bidix. Markaad u timaadaan inaad suuqa kala warbaahinta, guji "Music" on line ugu sareeya. In uu furmo suuqa music ah, guji saddexagalka hoos "Add" si ay u doortaan "Add File" ama "Add Folder". Dooro heeso aad doonayay fayl music. Iyaga dejinta si aad iPhone.
Fiiro gaar ah: TunesGo Retro si buuxda u la jaan qaada macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, 8 macruufka iyo macruufka 9 iyada oo aan wax dhibaato ah.
Si aad u dajiyaan videos, kaliya aad u baahan tahay inaad guji "Media"> "Movies"> saddexagalka "Add"> "Add File" ama "Add Folder" hoos.
Marka laga reebo music iyo videos, waxaad ku dari kartaa prodcast, Lugood U, bandhigyada TV oo dheeraad ah si aad u iPhone aad. Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan playlist, guji "playlist"> saddexagalka "Add"> ka yar "Add playlist ka Computer" in lagu daro playlist.
Intaa waxaa dheer, haddii aad iibsato cusub iPhone 3GS iyo talo jiraan in ay dajiyaan sawiro si iPhone 3GS la PC in ay Transfer iPhone 3GS, idinku waajibka ah inaad guji "Sawirro" inay soo qaadaan suuqa kala maaraynta sawirada.
Ka dib markii in, guji saddexagalka rogay "Add" hoos. In liiska hoos-hoos u, dooro "Add Folder" si ay u gudbiyaan album aad iPhone. Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan sawirada qaar ka mid ah. Fur album ah ama folder, sida Photo Library oo guji "Add". Dooro sawiro aad qorsheysaneyso inaad ka soo dhoofsadaan ka dibna riix "Open".
Ama, waxaad xitaa jiidi karaan jeedi sawiro ama albums ka computer si iPhone iyo sidoo. Waa arrin sahlan.
Waxaa intaa dheer, iyada oo barnaamijkan, waxa aad awoodi kartaa inaad u guurto xiriirada ka computer si iPhone. Guji "Xiriirada" geedka buugga bidix. In suuqa kala xiriir ah, guji "Import / Dhoofinta". In menu jiido-hoos, dooro "contacts Import ka computer". In menu jiido-down on xaq ah, dooro "ka file vCard".
Fiiro gaar ah: The version Mac ma taageeri xiriirada degida in aad iPhone in muddo ah.
Download PC si kala iibsiga iPhone hadda si aad u hesho muuqaalada dheeraad ah oo cajiib ah!
Daawo Video ee PC in Transfer iPhone
Photos Transfer, Xiriirada, Calendar, iMessage, Video iyo Music ka iPod in iPho
4 Siyaabaha wareejiyo calender iCloud in Android
Ka macruufka, Android, iyo Symbian Phones Bedelka SMS si macruufka 7/8/9